Maninona ianao no mila manatsara ny safidinao amin'ny karatra EMV | Martech Zone
Alatsinainy, 15 Jona, 2015 Alatsinainy, 15 Jona, 2015 Douglas Karr
Raha tao amin'ny IRCE aho dia nipetraka niaraka tamin'ny SVP an'ny Intuit's Payments and Solutions Commerce, Eric Dunn. Izany dia fijerin'ny maso ny fitomboan'ny Intuit eo amin'ny tsenan'ny mpivarotra sy ny ecommerce. Raha ny marina dia maro ny olona tsy mahatsapa fa vola be kokoa no mivezivezy amin'ny Intuit noho ny PayPal raha ny resaka varotra an-tserasera no resahina (raha ampidirinao ny tolotra karamany).
Ny Intuit dia manohy miezaka ny ho vahaolana maharitra amin'ny orinasa ecommerce na antsinjarany izay ahafahan'ny tompony mahita ny tena foto-bolany. Tafiditra ao anatin'izany ny tolotr'izy ireo mifaninana amin'ny fikarakarana fandoavam-bola. Mba hanampiana ireo orinasa madinidinika hampitombo ny fisian'izy ireo e-varotra, QuickBooks Online miara-miasa BigCommerce.com ary Shopify mamela ny SMB hivarotra an-tserasera mora foana, amin'ny toerana fivarotany sy amin'izay rehetra misy azy.
Ny karatra fanovana amin'ny karatra EMV
Orinasa manao carte de crédit manao tetezamita mankany carte de crédit azo ampiasain'ny puce hatramin'ny 1 Oktobra 2015, fantatra amin'ny anarana hoe karatra EMV. EMV midika hoe Europay, MasterCard, ary Visa, mpamorona ny fenitra. Ity fiovana ity dia midika fa ny karatry ny mpanjifanao rehetra dia hanana puce embedded izay hovakina amin'ny fomba hafa noho ny fampiasana ny strip magnet.
Ny teknolojia EMV dia novolavolaina hanampiana amin'ny ady amin'ny fanamorana ny karatra andriamby azo averina. Hatramin'ny nampidirana ny karatra EMV-chipped ho eo amin'ny tsenany dia misy ny hosoka amin'ny carte de crédit mivantana nidina 72%. Ny fandoavam-bola EMV dia azo atao amin'ny alàlan'ny chip miorina na tsy misy tariby amin'ny alàlan'ny terminal izay manohana contactless Fandoavam-bola EMV.
Ny mety tsy ho tsapanao dia ny fanovana ny EMV dia manova be ny andraikitra amin'ny mpivarotra sy amin'ny olon-kafa rehetra mandray ny carte de crédit amin'ny alàlan'ny swiper card. Ity misy topimaso avy amin'ny Intuit:
Ianao dia afaka mamaky bebe kokoa momba ny EMV ary maninona ianao no tokony mikasa ny hifindra monina ho an'ireo mpamaky vaovao ao amin'ny tranokala Intuit. Manoloana ny fiovan'ny adidy EMV, Intuit QuickBooks dia mamoaka koa a mpamaky EMV vaovao. Ny karatra EMV dia natao hampidirina ao amin'ny mpamaky ary hijanona eo amin'ny toerany mandritra ny fifanakalozana iray manontolo.
Fandraisana an-tanana ny teknolojia EMV
Intuit nanadihady tompona orinasa kely hahazoana ny fomba fijerin'izy ireo amin'ny teknolojia EMV ary ny fiovan'ny andraikitra ho avy:
42% amin'ireo tompona orinasa kely dia mbola tsy naheno ny fe-potoana farany fiovan'ny andraikitra EMV.
58% amin'ireo orinasa madinidinika no manana varotra ambony kokoa rehefa mandoa carte de crédit ny mpanjifa.
57% ny valinteny dia nanonona ny vidin'ny terminal na mpamaky vaovao ho antony lehibe mahatonga azy ireo tsy handamina na hanatsara ny vahaolana EMV mifanaraka aminy.
85% amin'ireo tompona orinasa kely izay tsy hifindra monina, na tsy tapa-kevitra, no tsy mahalala ny trosa sy ny andraikitra ara-bola horaisin'izy ireo manomboka amin'ny volana oktobra.
86% amin'ireo tompona orinasa kely izay tsy hifindra monina, na tsy tapa-kevitra, dia mety tsy ho afaka hiantsoroka ny trosa ara-bola sy ara-dalàna amin'ny fifanakalozana karatra hosoka.
Tags: vahaolana ara-barotracarte de créditswiper carte de créditkaratraemvmpamaky emveric dunneuropayintuitIrcemastercardfandoavam-bolachips marani-tsainavisa ho